Grenady - Wikipedia
I Grenady na Grenada dia firenena ao Amerika Afovoany, ao amin' ireo nosy Karaîba, izay manana morontsiraka ao amin' ny Ranomasimbe Atlantika sy ny Ranomasin' ny Karaîba. Manana velaran-tany mirefy 348,5 km2 izy, i Saint George's no renivohiny ary tombanana ho 11 454 ny isan' ny mponina tao tamin' ny taona 2018.
Sainan' i Grenady
Sarin-tany maneho an' i Grenady eo anivon' izao tontolo izao
Ny tanin' io firenena io dia mahafaoka ny nosy Grenady sy ireo nosy ao amin' ny ilany atsimo amin' ny tangoro-nosy Grenadina, izay nosy avy amin' ny afotroa sady ahitana tendrombohitra avo manerinerina eo anivon' ny havoana sy ny lohasaha. Toetanin-jana-pehin-tany mando ny toetaniny.
Sarin-tanin' i Grenady
Mainty hoditra ny ankamaroan' ny mponina ao Grenady ary ny fivavahana katôlika no arahin' ny maro anisa ao. Mivelona amin' ny fambolena eny ambanivohitra ny ankamaroan' ny mponina, ary miompana amin' izany ny toekaren' io firenena io, indrindra ny akondro, ny voamanitra (na moskada) ary ny kakaô. Miroborobo ny fizahan-tany ao amin' io firenena io. Nahazo ny fahaleovan-tenany i Grenady tamin' ny taona 1974 ary mpikambana ao amin' ny Commonwealth izy.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Grenady&oldid=1041138"
Dernière modification le 6 Desambra 2021, à 10:49
Voaova farany tamin'ny 6 Desambra 2021 amin'ny 10:49 ity pejy ity.